Nhau - Kubudirira uye kushandiswa kwema synthetic mica
Mica izita rakajairika remarara akachekwa emaminerari, ane hunhu hwekudzivirira, kujekesa, kupisa kupisa, kurwisa ngura, kupatsanura kuri nyore uye kubvisa uye kuzara kwekusimba. Inoshandiswa zvakanyanya muzvizoro, mapurasitiki, rabha, machira, kudzivirira ngura, kushongedza, kutenderera, kukanda, zvekuvaka uye mimwe minda, ichiita basa rakakosha muhupfumi uye kuvaka dziviriro.
I.Kutsvagisa nekusimudzira kwema synthetic mica
Zvinoenderana ne "synthetic mica", muna 1887, veRussia masayendisiti akashandisa fluoride kugadzira chidimbu chekutanga che fluoropoly mica kubva mukunyungudika; Pakazosvika 1897, Russia yakadzidza mamiriro ekuumbwa kwemaminerizerizer chiito. Muna 1919, Germany Siemens - Halske kambani yakawana yekutanga patent ye synthetic mica; United States yakabata zvese zvitsvakiridzo nezve synthetic mica mushure mehondo yenyika yechipiri .Sezvo yakanyanya kupisa tembiricha, chinhu chakakosha chekudzivirira uye tekinoroji, United nyika yakaramba ichitsvaga mundima iyi.
Pakutanga chikamu pg China, iyo mica yechisimba inogona kugutsa hupfumi hwenyika nekusimudzira. Nekudaro, nekukurumidza kukurumidza kwesimba, indasitiri yemuchadenga, iyo mica yechisikigo haichakwanise kusangana nezvinodiwa. Mamwe maChinese masangano akatanga kudzidza synthetic mica.
Masainzi ekutsvagisa masangano pamwe nezvikoro, hurumende nemabhizimusi zvinoita kuti kutsvagisa uye kugadzirwa kweyakagadzirwa mica ipinde muchikamu chakakura kusvika zvino.
II. Zvakanakira zvekugadzira mica zvichienzaniswa neyakasikwa mica
(1) Yakagadzikana mhando nekuda kwechimiro chimwechete uye huwandu hwezvinhu zvakagadzirwa
(2) Yakachena kuchena & kuputira; hapana radiation radiation
(3) Isina kurema simbi, sangana neEuropean uye United nyika standard.
(4) Yakakwirira kubwinya uye kuchena (> 92), zvinhu zvesirivha parera pigment.
(5) Zvinyorwa zveparera uye kristall pigment
III. Yakakwana Kushandiswa kweyakagadzirwa mica
Mune mica indasitiri, zvinodikanwa kuti ushandise zvakazara mica chinyorwa padivi peiyo mikuru mica pepa Heino iko kushandiswa kwakazara kweyakagadzirwa mica sekutevera:
(1) synthesize mica upfu
Zvimiro: Yakatsvedza zvakanaka, yakasimba kufukidza uye kunamatira.
Kushanda: kuputira, zvedongo, anti-ngura uye indasitiri yemakemikari.
Huajing chakaita zvokugadzirwa mica muridzi kuvaka kwakakwana, pachena uye guru chinhu reshiyo, inova yakanakisisa zvinhu parera pigment.
(2) Yakagadzirwa mica ceramics
Chakaita zvokugadzirwa mica Ceramics rudzi yezvinhu, izvo zvine zvakanakira mica, Ceramics uye mapurasitiki. Iyo ine yakadzikama kugadzikana, kuputira kwakanaka, uye kupisa kupisa.
(3) Kukanda zvigadzirwa
Iyo mhando nyowani yezvinhu zvisina kujairika zvekuisirwa zvinhu zvine yakanyanya kupisa tembiricha, uye anti-ngura
Chakanakira: yakakwira kuputira, mehendi simba, mwaranzi kuramba, oxidation kuramba uye zvichingodaro.
(4) chakaita zvokugadzirwa Mica yemagetsi kudziyisa ndiro
Ichi chinhu chitsva chinoshanda, icho chinoitwa nekupenda ficha ye semiconductor firimu pane yekugadzira mica ndiro. Sechinhu chemidziyo yemumba, haina hutsi uye haina hunhu pasi pekupisa kwakanyanya, saka iri kushandiswa zvakanyanya uye kuvandudzwa nekukurumidza mazuva ano.
(5) Chakaita zvokugadzirwa mica parera pigment
Sezvo synthetic mica iri yekugadzira zvinhu, iyo mbishi zvinhu zvinogona kuve nemabatiro akanaka. Naizvozvo, iyo simbi inorema uye zvimwe zvinokuvadza zvinogona kudzivirirwa kubva pakutanga .Iyo yekugadzira mica ine yakachena kuchena, kuchena, kubwinya, kuchengetedzeka, isina-chepfu, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye yakanyanya tembiricha inodzivirira. dehwe, zvigadzirwa, machira, zvedongo, kuvaka uye yekushongedza indasitiri.Nekuwedzera kuri kugadzirwa kweyakagadzirwa mica tekinoroji, ine simba guru muhupenyu hwezuva nezuva, maindasitiri ane hukama anosimudzira nekukurumidza.